Turkmenistan ayaa u furtay hawadeeda duulimaadyada daad -gureynta Afghanistan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Turkmenistan » Turkmenistan ayaa u furtay hawadeeda duulimaadyada daad -gureynta Afghanistan
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkmenistan • Wararka kala duwan
Xaaladdan oo kale, iyada oo fulinaysa ballanqaadyadeedii caalamiga ahaa, oo ay ku jiraan kuwa ka soo baxay sharciga caalamiga ah ee bani'aadamnimada, Turkmenistan waxay siin doontaa hawadeeda qaadista dadkaas diyaaradaha dawladaha shisheeye.
Bishii Ogosto 15 -keedii, Daalibaan waxay gashay Kabul waxayna si buuxda gacanta ugu dhigtay magaalada.
Wadamada reer Galbeedka ayaa muwaadiniintooda ka daad gureynaya Afghanistan.
Turkmenistan ayaa u oggolaanaysa duulimaadyada daadgureynta Afghanistan inay soo maraan hawadeeda.
Xafiiska warfaafinta ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Turkmenistan ayaa maanta soo saaray bayaan ay ku shaaciyeen in dowladda Turkmenistan ay qaadatay go’aan ah in hawada dalka loo furo si loo daadgureeyo duulimaadyada ka duulaya dadka ajaanibta ah ee ka baxaya Afghanistan.
“Sida la og yahay, waddamada qaarkood waxay bilaabeen inay daad gureeyaan muwaadiniintooda ku sugan Afgaanistaan. Xaaladdan oo kale, iyadoo fulinaysa ballanqaadyadeedii caalamiga ahaa, oo ay ku jiraan kuwa ka soo baxay sharciga caalamiga ah ee bani'aadamnimada, Turkmenistan waxay bixin doontaa hawadeeda si ay dadkan u raacaan diyaaradaha dowladaha shisheeye, ”ayaa lagu yiri qoraalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
15kii Ogosto, kooxda xagjirka ah ee Daalibaan ayaa soo gashay Kabul iyadoon wax iska caabin ah la samayn oo si buuxda gacanta ugu dhigay caasimadda Afgaanistaan ​​dhawr saacadood gudahood. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa dalka ka cararay, isaga oo la sheegay inuu la baxay 169 milyan oo doollar oo ah khasnadda dawladda.
Tan iyo markaas, Madaxweyne ku -xigeenka Afghanistan, Amrullah Saleh, ayaa ku dhawaaqay inuu yahay ku -simaha madaxweynaha, isagoo ku baaqay in iska -caabin hubaysan lala galo Taliban.
Wadamada reer galbeedka ayaa daad gureynaya muwaadiniintooda iyo shaqaalaha safaarada.